Amajjin tokko Guyyaan WBO seenaa qabsoo Uumata Oromoo ABO'n geggeefamu keessatti bakka gudddaa kanqabuu fi bara baraan golee Oromiyaa fi Oromoota biyaa ambaa adda addaa keessa faca'anii jiraatanii ni kabajama. Guyyaa WBO mirgaa fi Oromummaa WBO nu gonfachiisaan yaadachaa fi falama abbaa bi yyummaa Oroof jabaannee qabsaa'uuf guyyaa waadaa keenyaa itti haaromsinu dha.
Kanaaf nutiis Misensoonfi degartoon ABO kuta New Zealand keessa jiraanu guyyaa kana ilalchisee sirna ho'aan kabajanee holeera. Walgahiin kun akkuma adaa Oromootti ebba mogudotiin baname faruu Aalabaatiin cufamee jira.
Walgahii kana hasadhaan kana banana duraa'taa Kuta Neazland yeroo ta'aan halaa qabsoo Bilisummaa Oromoo yeroo amma kana erraa jiruufi guyyaan kun maliif akka kabajaamu ibsii balaan kenamee jira.
Kantii hasudhaan bakka buooni konyaa walduraa dubaan ibsaa balla kenanii jiru,aksumaas walgahiin kun kara saraara paltokitiin Uumman Oroomoo adunyarraa jiru akka irraa qoda fudhatu godhamee jira.Akuma kanan WBO jabesuuf suraa gototaa jaallan shaan(5)of keessa kan qabu ojetame kara sarraara paltokii caalbasitti dhiesuun $USA kuma lamaatti(2000) gurguramee jira, caalbaasi kana kan injifatee J/Boona Oromoo ture, waluma Galati guyyaa kana ialcisee WBO jabesuuf $NZ 4700 gumchaan jiru.
Knafu nutiis ibsa ejeenno arman gadi kana bafanee jira.
1. Yeroo amma kana WBOn tarakafi diinaartti fudhachaa jiru dhinqisifachaa waan dandanyun bira dhabachuf waada keenya haarmsinee jira.
2. Gootota Oromoo Qabsoo Oromoof jechaa lubbuu isaanii dabarsan, akkasumas kanneen hanga hardhaatti mana hidhaa keessatti mootummaa abbaa irreen dararaman gadda guddaan yaadana,
3. ABO dhaloota irraa eegalee kan duula belleessii diinaa keessa qoramee darbe tahuu ni hubanna kana keessa darbuun sadarkaa qabsoon keenya amma irra jiru diinoota keenya abdii waan kutachiisaa jiruuf ololaa diggaa, duula balleessii sadarakaa adda addaati diinni qabsoo keenyaa oofaa jiru dammaqinaan dura dhaabachuun qabsoo ABOn geggeeffamu bakkaan gahuuf, dhaaba keenyaafiis saba Oromoofis waadaa ni seenna,
4. ABO fi Uummata Oromoo addaan qooduuf tattaaffii diinnonni sabaa fi dhaabaa godhan hunda dura dhaabbanna,
5. Dargaggoonni , barattoonni, daldaltoonni, akkasumas qotatee bultoonni Oromoo hanga qabsoon Oromoo galii isaa ga'utti harka wal qabannee mootummaa abbaa irree ofirraa buqqisnu waamicha goona.
Misensotaafi degartootaa ABO
Kuta New Zealand.